Zvigadzirwa Uye Zvishandiso Vagadziri - China Zvigadzirwa Uye Zvishandiso Vatengesi & Fekitori
Energy Mhinduro Charge / kuburitsa Kuyedza Sisitimu yeMagetsi Bhatiri Pack (inotakurika)
Iyi bhatiri pack pasero yakaenzana yekugadzirisa sisitimu inosanganisa kuchaja, kugadzirisa, kuburitsa uye kumisikidza. Inogona panguva imwe chete kuita maseru ekugadzirisa pane anosvika makumi mana tambo dzemagetsi mudziyo bhatiri mapakeji, emagetsi bhasikoro bhatiri mapaketi uye EV mamodule.
Nebula Bhatiri Energy Mhinduro Mhinduro & Grading Tester
Ichi chigadzirwa chakangwara maseru esheni mhinduro mhinduro & grading kuyedza system, iyo inonyanya kushandiswa kwesimba maseru kuumbwa, kukwirisa uye kutenderera kwehupenyu kuyedza.
Simba Bhatiri Kurongedza End-ye-Mutsetse Yekuyedza Sisitimu yakagadzirirwa kuyedza yakakwira simba bhatiri.
Nebula PCM Bvunzo System yeMafoni Foni & Dhijitari Chigadzirwa Li-ion Bhatiri
Yekukurumidza muedzo wekutanga uye wekudzivirira hunhu kuyedzwa kwePCM ine 1 waya mhinduro mune 1S & 2S Li-ion bhatiri pack.
Iyo simba bhatiri kurongedza inoshanda mamiriro simulation bvunzo system yakanyatsogadzirirwa kuyedza bhatiri, mota, zvemagetsi kutonga kweMagetsi Mota. Inoshandiswa zvakanyanya mu lithiamu bhatiri pack bvunzo, super capacitor bvunzo, mota yekuita bvunzo uye mamwe minda yekuyedza.
Nebula Simba Li-ion Battery Pack BMS Tester
Iyi Li-ion bhatiri pack PCM bvunzo system, iyo inogona kuiswa kune yakasanganiswa bvunzo (senge yekutanga uye yekudzivirira hunhu bvunzo nezvimwe) zve1S-120S bhatiri pack BMS ine LMU neBMCU ma module.
Simba Mhinduro Mhando Charge-kuburitsa Tester
Iyi ikomputa-inodzorwa uye simba-mhinduro maitiro esimba bvunzo system inonyanya kushandiswa pakuongorora kwemagetsi kuita kwemasimba-epamusoro-simba epamusoro-simba mabhatiri echipiri, mota uye magetsi ekuchengetedza magetsi mabhatiri.
Bhatiri Kubuda Tester, 48v Bhatiri Kugona Kuburitsa Tester, 18650 Muedzo, Bhatiri Kubuda Kwakaita Kugona Tester, Battery Zvoga Kuedzwa Zvekushandisa, Zvishandiso zveBhatiri Ekuyedza,